Oromiyaa: Hojjettoonni mootummaa 6,700 ragaa sobaan qaxaraman of saaxilan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Hojjettoonni mootummaa ragaa sobaa fayyadamuu amanan dhiifamni ni taasifamaaf
Hojjettoonni mootummaa ragaa barnoota sobaan hojjechaa jiraniifi yeroo dhiifamaa kennametti of hin saaxillee seeraa dhiyaachuufi hojiirraa ari'amu danda'u jedhame.
Hojjettoonni mootummaa ragaa barnootaa, mirkaneessa gahumsa ogummaa (COC), heeyyama konkolaachistummaa fi muxxannoo hojii sobaan fayyadamaa turan 6,700 ta'an of saaxiluu isaanii hogganaan biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa BBC'tti himan.
Hojjattoonni hoggansaa fi sadarkaa sanii gadi jiran of saaxilan kunneen waajjiraalee mootummaa garaa garaa keessatti hojjechaa kan jirani dha.
Ta'us, hojjettoota mootummaa naannichi qabu miiliyoona walakkaa waliin yeroo madaalamu kun xiqqaa dha jedhu.
Haa ta'u malee, eeruu namootaan kennamuu fi sakkatta'iinsa hojjettootaan taasifamuun lakkoofsi hojjettoota ragaa sobaan fayyadamaa jirani haalaan dabalu akka danda'u yaada qabu.
Ragaa barnootaa sobaan mindeeffamuun baay'achuu fi tajaajila kennuurratti dadhabinni hojjattoota irratti mul'achuun qorannoon akka taasifamu sababa ta'eera.
Hojjettoonni Adoolessa 15 bara 2009 hanga hagayya 22/2009'tti of saaxilan dhiifamni godhameefi gulantaa hojii sadarkaa barnootaa fi muuxxannoo hojii sirrii qaban gitu irratti ramaddii ni argatu.
Kunneen eeruu fi sakkatta'insaan irra gahame garuu kallattiin hojiirraa yoo gaggeeffaman, himannaan yakkaa mana murtiis isaan eeggata jedhaniiru.
Kana malees, faayidaawwan ragaa sobaan argachaa turan akka deebisanis ni taasifama.
Fuula duratti sakatta'insi akkanaaa itti fufa. Hojjettoota waajjiraalee mootummaa keessatti haaraa qacaraman immoo yeroo yaalii isaanii keessatti ragaaleen barnootaa isaanii akka sakkata'amu taasifama.
Eeruun ragaa barnootaa sobaa qaamaan, gama lakkoofsa bilbilaa tolaa akkasumas lakkoofsa bilbilaa waajjiraaleetiin taasifamu hanga Fulbaana 22'tti kan itti fufu ta'uu isaa Dr. Biqilaa Hurrisaa BBC'tti himaniiru.